ခေါင်းစဉ်တခုထည့်ဖို့အကြံပေးချင်လို့ပါ.. [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > FAQ & Request Zone > အကြံပေးရန် > ခေါင်းစဉ်တခုထည့်ဖို့အကြံပေးချင်လို့ပါ..
View Full Version : ခေါင်းစဉ်တခုထည့်ဖို့အကြံပေးချင်လို့ပါ..
Diploma in Civil Engineering နဲ့ S&#039;pore Steel Structure Company တစ်ခုမှာ Detailer(CAD Operator) လုပ်နေပါတယ်..
Engineering Software တွေထဲမှာ X-Steel (Tekla Structure ) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးချက်လေး အဆင်ပြေရင်ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်...
လက်ရှိ Auto CAD ပဲအသုံးပြုနေပြီး ကိုယ်တိုင်လဲလေ့လာဆဲမို့ အချိန်ရရင်ရသလိုဝင်ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်...
သူကSteel Structure အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနေကြပေမဲ့...
မျက်စိရှေ့မှာတော့ Indian နဲ့ China က ဒီ Software အားကိုးပြီး ကိုယ်ပိုင် Structual Detailing Company လေးတွေနဲ့အလုပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်..
Philipene မှာလဲ အတော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးကြပုံပါပဲ..
ဒီ Forum လေးကို စတင်တည်ထောင်သူများရော ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးသူများကိုပါ အရမ်းအားကျပြီး ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...
ဆွေးနွေးချက်တွေထဲမှာ Aircraft Carriers and Submarine လို ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ နည်းပညာတွေအကြောင်း တင်ပေးပါလားဟင်
ကျွန်တော်က အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်က မဟုတ်ပေမဲ့ အလှမ်းမှီ သလောက် ရေးပေးပါ့မယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်၏ အကျိုးအတွက်အစဉ် မျှော်မှန်းလျှက်။
ဆွေးနွေးချက်တွေထဲမှာ Aircraft Carriers and Submarine လို ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ နည်းပညာတွေအကြောင်း တင်ပေးပါလားဟင်။ကျွန်တော်က အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်က မဟုတ်ပေမဲ့ အလှမ်းမှီ သလောက် ရေးပေးပါ့မယ်။ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်၏ အကျိုးအတွက်အစဉ် မျှော်မှန်းလျှက်။
Aircraft Carriers and Submarine ကို ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာထဲ ထည့်သင့်တယ်လို.ယူဆပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်နှစ်ခု ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့။
သင်္ဘောပေါ်မှာ လေယာဉ် ထားမယ့် GROUND FACILITY ပိုင်းကတော့ USER နဲ. ညှီယူရမှာပါ။ ရေငုပ်သင်္ဘောကိုလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ ဘုတ်တွေထဲက သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ တင်ပေးပါခင်ဗျာ.. ရေကြောင်းဗိသုကာ ဘုတ်မှာ ထည့်လည်း ရပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာလို့ နာမည်တပ်မတပ်က မဆိုင်ပါဘူး အဲဒီပညာရပ်မှာ တတ်သိနားလည်ရင် အဲဒီအင်ဂျင်နီယာပဲပေ့ါ ... ရေးပေးပါဥိးနော်.. လူအရမ်းနည်းလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်လျက်ပါဗျာ..
ွprogrammingခောင်းစဉ်အောက်မှာ python အတွက်ခေါင်းစဉ်ဖွင့်ထားတာ မတွေ့ဘူး ပိုင်သွန်လေ့လာမလို့ ဟာကို ဘယ်သူများရေးထားတာရှိလဲလို့ သိချင်လို့ ဝင်ကြည့်တာ မတွေ့ဘူး။ ပိုင်သွန်အတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ဖွင့်ပါဦး သိတဲ့သူတွေ ဝင်ရေးနိုင်အောင်။
ကျွန်တော် python ကို ဘုတ်အသစ်ဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါပြီး။
ကျွန်တော် တစ်ခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Programming Forum အောက်မှာ Database Sub-forum ရှိပါတယ်။ Database အောက်မှာ လက်ရှိရှိနေသည့် DataAccess , My Sql/PgSql , MS Sql, Oracle တို့လိုမျိုး "Microsoft Visual FoxPro DBMS" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ထည့်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးနိုင်အောင် လုပ်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီခေါင်းစဉ်လေး ဖွင့်ပေးစေချင်တယ်။ Object Oriented Language တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် Database ဖြစ်နေတာကြောင့် Programming/ Database အောက်မှာ ရှိသင့်တယ် ထင်လို့ပါ။
ကျွန်တော် တစ်ခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Programming Forum အောက်မှာ Database Sub-forum ရှိပါတယ်။ Database အောက်မှာ လက်ရှိရှိနေသည့် DataAccess , My Sql/PgSql , MS Sql, Oracle တို့လိုမျိုး "Microsoft Visual FoxPro DBMS" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ထည့်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးနိုင်အောင် လုပ်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီခေါင်းစဉ်လေး ဖွင့်ပေးစေချင်တယ်။ Object Oriented Language တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် Database ဖြစ်နေတာကြောင့် Programming/ Database အောက်မှာ ရှိသင့်တယ် ထင်လို့ပါ။
ကျနော်ထည့်ပေးဖို့ကြိုးစားရာမှာ database error တက်တက်သွားလို့ခဏစောင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဟိုတလောတုန်းကလဲ "ဘူမိဗေဒ နဲ့ အသုံးချဘူမိဗေဒ" sub-forum တခုထည့်တုန်းကလဲ အဲ့ဒီလို ဖြစ်ဖြစ်သွားသေးတယ်။
Programming အောက်မှာ OOP ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အခွဲတစ်ခု ထည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်..။ Java ရော C# ရောက Object Oriented Languages တွေမို့ အင်တာဗျူးတွေက OOP အခြေခံတွေကို ရေးခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်..။ အဲဒီအတွက် ဥပမာလေးတွေ ရေးမယ်ဆို ရေးစရာရှိလို့ OOP ထည့်ပေးပါဦး...။
အကြံပေးထားတဲ့ အတိုင်း ထည့်ပေးထားပါသည်။ အဆင်မပြေပါက (သို့) ပြင်ဆင်ချင်သည်များ ရှိပါက ပြန်ပြောပေးကြပါ။
Programming အောက်မှာ OOP ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အခွဲတစ်ခု ထည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်..။ Java ရော C# ရောက Object Oriented Languages တွေမို့ အင်တာဗျူးတွေက OOP အခြေခံတွေကို ရေးခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်..။ အဲဒီအတွက် ဥပမာလေးတွေ ရေးမယ်ဆို ရေးစရာရှိလို့ OOP ထည့်ပေးပါဦး...။
လင့်သို့သွားရန် => OOP .... (http://www.myanmarengineer.org/forums/forumdisplay.php?419-OOP)
လင့်သို့သွားရန် => Microsoft Visual FoxPro DBMS (http://www.myanmarengineer.org/forums/forumdisplay.php?402-Microsoft-Visual-FoxPro-DBMS)
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုလောက်အကြံပေးချင်လို့ပါ။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစာအုပ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ခေါင်းစဉ်အခွဲလေးတွေနဲ့ စာအုပ်တင်ရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလားလို့ပါ။ ဥပမာ. soil နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်၊ Structure နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဒါဆိုရင် စာအုပ်ရှာတဲ့သူတွေပိုအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်တယ်။ အခုက အကုန်ပေါင်းနေတာဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ Connection ကလည်း မကောင်းရင် ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ စာအုပ်လေး မတွေ့တွေ့အောင် တော်တော်ကို စောင့်ရလို့ပါ။
လုပ်ပါဦးဗျ ... ညီလေးလဲ မခွဲတတ်လို့။
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုလောက်အကြံပေးချင်လို့ပါ။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစာအုပ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ခေါင်းစဉ်အခွဲလေးတွေနဲ့ စာအုပ်တင်ရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလားလို့ပါ။ ဥပမာ. soil နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်၊ Structure နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဒါဆိုရင် စာအုပ်ရှာတဲ့သူတွေပိုအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်တယ်။ အခုက အကုန်ပေါင်းနေတာဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ Connection ကလည်း မကောင်းရင် ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ စာအုပ်လေး မတွေ့တွေ့အောင် တော်တော်ကို စောင့်ရလို့ပါ။
အချိန်ပေးပြီး ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် ကိုနှင်းမောင် ရေ ...
အချိန်ရရင်ရသလို တဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ပေးပါ့မယ် လောလောဆယ် အလုပ်တွေ ပိလာပြန်လို့ပါ
ခွဲချင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်နာမည်ရယ် ..
ပြီးတော့ အဲဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရွှေ့ထားချင်တဲ့လင့်လေးတွေကို ရေးပေးထားပါ လား..
အဲဒါဆို ကျွန်တော်တို့လဲ အားရင် လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်...
ဘယ်ထုတ်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျူစီဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲနောက်တစ်ခုက ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ သုံးစွဲမှုက ဘယ်လောက်အထိ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလဲဆိုတာကို Audit က ပြန်စစ်ဆေးတယ်။
Quality က ကောင်းနေလဲ ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ကလဲ လိုသေးတယ်။
မော်တော်ကားမှာဆိုရင် RELIABILITY PROGRAM ဆိုတာ လိုအပ်တယ်။ ထို့အတူ လူလိုက်ပါစီးနင်းတဲ့ ယာဉ် (စက်ဘီး၊ဆိုက်ကား ခဏထား) တိုင်းရဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အပါအ၀င် MAINTENANCE STEERING လုပ်ဆောင်ပုံ အပါအ၀င် ထုတ်လုပ်မှုမှာလဲ RELIABILITY PROGRAM လိုအပ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ထို့ကြောင့် RELIABILITY PROGRAM ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေး စတင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ တင်ပြအပ်ပါတယ်။